China Multi mmewere elu arụmọrụ ihuenyo rụpụta na ụlọ ọrụ | Akụrụngwa Chengxin
Multi mmewere elu arụmọrụ ihuenyo
Otutu uzo di elu nke oma bu ohuru ohuru nke ngwa oru ohuru nke Xinxiang Chengxin vibration equipment Co., Ltd. O kwesiri ka o doo anya maka ihe nkpuchi na ihe ndi ozo. Efere sieve ahụ na-anabata efere sieve okpukpu abụọ na arụmọrụ dị elu na arụmọrụ dị egwu gburugburu ebe obibi.
1, Segmenting screening, ihuenyo igwe n'ozuzu dịghị vibration, ihuenyo vibration
Igwe arụmọrụ dị elu dị iche iche dị iche na ihuenyo ọdịnala ọdịnala n'ihi na ọ naghị esonye na vibration n'ozuzu ya. Efere dị n'akụkụ, mkpuchi elu na isi nke igwe ihuenyo bụ akụkụ edozi, nke na-adịghị esonye na ịma jijiji, naanị ntupu ihuenyo na-esonye na ịma jijiji.
2, Emechiela owuwu
A na-etinye ihe ngebichi nke nwere nnukwu arụmọrụ na ọnọdụ ọrụ ya na uzuzu ọzọ, nke a na-eme n'ime usoro mechiri emechi kpamkpam, ka uzuzu wee ghara ịpụ apụ wee mezuo ihe nchekwa nke gburugburu.
3, Ibu buru ibu njupụta na nta ike ibu
N'ihi na teknuzu e ji mara ihuenyo vibration na ọ dịghị vibration nke ihuenyo ahụ, na-agbanwe ike nchegbu nke multi-mmewere elu-arụmọrụ ihuenyo nwere ike belata na kacha nta, otú ahụ ka njupụta nwere ike ukwuu ụba, ma di omimi ibu nwere ike ukwuu belata.
4 、 Ike dị ala
N'ihi ọnụ ọgụgụ dị nta nke akụkụ ahụ jijiji na obere ịma jijiji, enwere ike belata ike nke ọtụtụ mmewere arụmọrụ dị elu. E jiri ya tụnyere igwe ọdịnala ọdịnala, enwere ike belata ike karịa okpukpu abụọ.
5, Unique PLC akara usoro
A na-ejikarị ọtụtụ motọ arụ ọrụ multi-element arụmọrụ dị elu na oge izizi nke ọ bụla moto bụ 10-15 sekọnd. Ọ na-amalite na ntụgharị ihu wee kwụsị na ntụgharị ihu, iji nweta ihe mgbaru ọsọ nke ịmalite na ịkwụsị ụgbọ ala efu. Enweghị ihe echekwara na ihuenyo maka nlele dị mfe. A na-eji PLC achịkwa njikwa mmalite, mmechi, akwụkwọ ntuziaka na njikwa nke ngwa niile.
6 、 Nọgide Na-enwe Mmezi
Anyị na-eme vibration mmiri nke multi-element high-arụmọrụ ihuenyo modular na tozuru etozu, ka ngwa ngwa dochie dum, ala mmezi, ma merie oge maka nchekwa mmepụta.
7, Low-arụ ọrụ na-eri
Igwe arụmọrụ dị elu nwere ọtụtụ ihe nwere akụkụ ole na ole jijiji, obere ihe na obere ike. Ọ bụ nke kacha nta n’ime siela niile. Efere nsị bụ akụkụ na-adịghị ike nke ihuenyo arụmọrụ dị elu, mana ụgwọ ya dị ala. Ọnụ ego dị elu nke arụmọrụ dị elu enweghị atụ nke igwe igwe ọdịnala.
8, Nka na ụzụ uru nke multiple elu arụmọrụ ihuenyo
Otutu ihe di elu nke oma bu ihe nlere anya, nke na-eji usoro nke vibration emeputa nyocha. Njirimara ya dị iche iche bụ: nyocha nkewa, igwe ihuenyo dum anaghị ama jijiji, efere sieve na-ama jijiji ma nwee nnukwu ọrụ njupụta. Igwe ihuenyo ahụ na-achọ mpaghara nyocha kachasị ukwuu, ọnụ ọgụgụ mmeghe buru ibu, ka ị nweta arụmọrụ nyocha kachasị.
Enweghị nsogbu na ọgwụgwọ nke ezigbo mmiri na nke nnyapade na-arụ ọrụ nwere ihu igwe dị elu na arụmọrụ dị elu, na nsonaazụ nhazi nnukwu unyi na-arụ ọrụ ka mma. Tụnyere ndị nkịtị ala ihuenyo, n'okpuru otu echetakwa ebe, na multi-mmewere elu-arụmọrụ ihuenyo nwere obere ike, ọ dịghị igbochi, ọ dịghị jamming, ike agafe ikike, elu oghere ọnụego, echetakwa mmetụta nwere ike mma dịkarịa ala ugboro atọ, na ogo akụrụngwa dị elu, na mmezi ego ga-ebelata nke ukwuu n'ihi mbelata nke ndozi ihe.
Nkà na ụzụ (ezi ihuenyo)：
Ngwa ngwa Ntupu size mm moto ọsọ r / min Ntụ ntụ kw Ugboro abụọ njupụta mm Nri nha mm ike nhazi t / h Ogologo * obosara * n'ịdị elu
CDYS-200 6-12 720 2 * 7.5 15-25 .50 200 4084 * 3230 * 2361
CDYS-300 6-12 720 3 * 7.5 15-25 .50 300 6500 * 3250 * 3600
CDYS-400 6-12 720 3 * 7.5 15-25 .50 400 6500 * 3500 * 3600
CDYS-500 6-12 720 3 * 7.5 15-25 .50 500 6500 * 3750 * 3600
CDYS-600 6-12 730 3 * 11 15-25 .50 600 6500 * 4250 * 3600
CDYS-800 6-12 730 4 * 11 15-25 .50 800 7642 * 4688 * 4400
CDYS-1000 6-12 730 5 * 11 15-25 .50 1000 8900 * 4810 * 5048
Nka na ụzụ (ihu igwe adịghị mma)
CDYS-600 30-50 730 1 11 15-25 300 600 2910 * 3464 * 2050
CDYS-800 30-50 730 1 11 15-25 300 800 2910 * 3664 * 2050
CDYS-1000 30-50 730 2 11 15-25 300 1000 4318 * 3664 * 3200
CDYS-1500 30-50 730 2 11 15-25 300 1500 4318 * 3864 * 3200
CDYS-2000 30-50 730 3 * 11 15-25 300 2000 5410 * 4085 * 4045
CDYS-2500 30-50 730 3 * 11 15-25 300 2500 5410 * 4385 * 4050
Nke gara aga: Nri ihuenyo gburugburu ebe obibi
Osote: Banana ekara vibrating ihuenyo
Elliptical Nhata ọkpụrụkpụ Screen
Elliptical Nhata ọkpụrụkpụ Screening Machine
Nha ọkpụrụkpụ Vibrating ihuenyo
Linear Nha ọkpụrụkpụ Vibrating ihuenyo
Ihe mgbochi m na-enwu enyo
Ultrasonic Jijiji Screen
Nri ihuenyo gburugburu ebe obibi
Na-agbanwe gburugburu ebe obibi